Golaha Baarlamaanka oo Cod Aqlabiyad Ah Ku Ansixyey Qaybtii Dhimanayd ee Golaha Wasiiradda – Radio Daljir
Diseembar 29, 2012 8:35 b 0
Muqdisho, 29, Dec- Golaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey Wasiiru Dowlayaasha iyo Wasiiro ku xigeenada uu dhawaan soo magaacabaay Ra?iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon ?Saacid?
Ra?iisul Wasaare Saacid ayaa ugu mahad celiyey Xildhibaanadda sida sharafta leh oo ay? u ansixiyeen qaybtii dhimanayad? ee golaha Wasiirada,
??Waxaan aad idiinka mahad celinayaa sida wanaagsan oo aad ula shaqaysaan xukuumadda, waxaana taas daliil u ah codka aqlabiyada ah oo aad markasata ku ansixisaan, sidoo kale waxaana u aragnaa in ay tahay waajib shaqo oo idin saaran? inaad soo celisaan wixii aad u aragtaan in aysan ku jirto danta guud. Waxaan idiin balan qaadaynaa inaan dib u habayn ku soo samayn doono Miisaaniyada aad ku soo celiseen xukuumadda sida ugu dhaqsaha badana ayaan dib idinkugu soo celinaynaa?
?Sidoo kale Ra?iisul Wasaare Saacid ayaa sheegay in xukuumadiisu ay dhisantahay mudo ka yar laba bilood walina aan la gaarin xiligii boqolka maalmood ahaa ee xukuumadda dib u eegis lagu samayn lahaa, sidaad daraadeed xukuumaddu waxau ku talaabsatay wax qabad muuqda mudadii yarayd.
?? Waxaan xooga saarnay xaga amaanka oo aan ku talaabsanay guulo waaweyn oo ay ka mid yihiin qaadidii isbaarooyinkii yaalay magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda kuwaas oo caqabad ku ahaa isu Socodka, Nabad galyada,iyo iyadoo Dhaqaale aad u faro badan laga qaadi jiray gaadiidka, taasina waxay calaamad u tahay sida ay nooga go?an tahay inaan dalka nabad ku soo celino. Waxaan sidoo kale diyaarinay oo dhawaan howl galaya ciidamo gaaraya kun Askari oo aan u dhamaystirayno qalabkooda kuwaas oo qayb weyn ka qaadanaya sugida amniga Caasimada, waxaa kale oo xusid mudan in ciidanka Qaranka oo garab sanaya kuwo AMISOM la wareegeen gacan ku haynta magaalda Jowhar?
?Xukuumaddu waxay wafti balaaran u dirtay magaalada Kismaayo waxayna la kulmeen soo dhaweyn balaaran oo dadka deeganku aysan u kala harin, waxay kulamo la qaateen bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana waftiga dowladda dadku ku dhaqan magaalda Kismaayo u muujiyeen sida ay u garab taagan yihiin.
Waxaana dowladu balan qaadaysaa inay gacan ka gaysan doonto sidii looga xorayn lahaa Alshabaab dagmooyinka ay uga harsan yihiin Jubooyinka iyo dhamaan gobolada Dalka, dhanka maamul u samaynta Jubooyinka dowaladu waxay qaadanaysaa hogaanka sidii maamul loogu samayn lahaa gobolada Jubooyinka iyadoo maamulkaas ka imanayo dadka deegaanka.
Waxaana arinkaas ku heshiiyey Dowladda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Taasina waa siyaada guud ee dowaladdu ka damacsantahay gobolada Jubooyinka iyo dhamaan gobolada Dalka.waxaa kale oo dowladdu qorshaynaysaa sidii wafti balaaran ugu diri lahayd gobolada Dhexe si ay gacan uga gaystaan sidii loogu dhisi lahaa maamul dadku raali ka yihiin?